Wararkii ugu dambeeyay ololaha musharixiinta ay ka wadaan magaalada Muqdisho (AKHRISO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Wararkii ugu dambeeyay ololaha musharixiinta ay ka wadaan magaalada Muqdisho (AKHRISO)
Waxaa saacidihii ugu dambeysay magaalada Muqdisho ka soconayay ololaha doorasho oo ay kala wadaan musharaxiinta u tartameeysa xilka madaxweynaha Soomaaliya, iyadoona mashquulkii ugu badnaa haatan laga dareemayo xarunta madaxtooyadda Villa Soomaaliya, Hoteelada Muqdisho iyo guryaha ay degan yihiin qaar ka mid ah musharixiinta.
Tiradda musharixiinta ee haatan ku tartameeysa doorashada xilka madaxweynaha ayaa gaareysa illaa 22-musharax, waxayna saacadihii ugu dambeysay kulamo gooni-gooni ah la yeelanayeen xildhibaanada labada Aqal ee baarlamaanka Soomaaliya, kuwaas oo ballanqaadyo kala duwan u sameeynaya.
Musharixiinta kala ah; Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa ah musharixiinta ololahooda doorasho si weyn looga dareemayo magaalada Muqdisho, waxayna labadaan musharax saacadihii ugu dambeysay kulamo isbada joog ah la yeelanayeen xildhibaanada labada Aqal ee baarlamaanka, si ay kalsoonida codkooda uga helaan.
Inta badan xildhibaanada labada Aqal ee baarlamaanka ayaa dhankooda marba musharax kula kulmaya xarumaha ay ku sugan yihiin musharixiintaasi ee ku yaala magaalada Muqdisho, waxayna la galayaan gor-gortan dhinacyo kala duwan leh.
Qaar ka mid ah musharaxiinta madaxweyne oo aan codka badan ku haysan xildhibaanada labada Aqal ee baarlamaanka ayaa durbadiiba bilaabay inay u ololeeyaan musharaxiinta kale oo ay isleeyihiin waa ay ku guuleysan karaan tartanka doorashada.
Musharixiintaasi codka yar heysto ayaa waxaa ka mid ah; Bashiir Raage Shiraar, C/raxmaan C/shakuur iyo Caddow Cali Gees, waxaana suurto-gal ah in saacadaha soo socdo ay si rasmi ah ugu dhawaaqaan inay ka tanaasuleen tartanka doorashada xilka madaxweynaha Soomaaliya.
Dhinaca kale, siyaasiyiin iyo niman dalaaliin ah oo u dhaxeeya xildhibaanada iyo musharixiinta tartameeysa ayaa saacadihii ugu dambeysay kulamo gooni-gooni ah la yeelanayay xildhibaanada labada Aqal ee baarlamaanka, kuwaas oo ballanqaadyo xad dhaaf ah u jeedinaya, si codkooda ay u siiyaan musharaxa ay iyaga wataan.
Warar hoose ay warbaahinta Bulshoweyn heleyso ayaa sheegaya in musharixiinta qaarkood ay durbadiiba bilaabeen qorshaha lacag siinta xildhibaanada labada Aqal oo maalinta berri codadka dhiibanaya, waxaana lacagta ugu yar uu xildhibaan kasta qaadanayo ay gaareysaa 100,000 (Boqol Kun oo Doolar), iyadoona laga yaabo inay kasii badato.
Si kastaba ha ahaatee, maalinta berri ah ayaa la filayaa in lagu kala baxo tartanka doorashada madaxweynaha Soomaaliya, taas oo in muddo ah la wada sugaayay, waxaana weli adag in si hordhac ah loo sii saadaaliyo cidda rasmiga ah ee kusoo bixi doonta doorashadaas.